imanoela fifaliana · Aogositra 2011 · Global Voices teny Malagasy
imanoela fifaliana · Aogositra, 2011
Oktobra 2019 9 Lahatsoratra
Jolay 2019 9 Lahatsoratra
Jona 2019 39 Lahatsoratra
Avrily 2019 27 Lahatsoratra
Desambra 2018 41 Lahatsoratra
Novambra 2018 54 Lahatsoratra
Oktobra 2018 94 Lahatsoratra
Jolay 2018 57 Lahatsoratra
Avrily 2018 20 Lahatsoratra
Aogositra 2017 21 Lahatsoratra
Mey 2017 24 Lahatsoratra
Marsa 2017 9 Lahatsoratra
Nanomboka nandika tamin'ny 25 Jona 2011 · 1105 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i imanoela fifaliana tamin'ny Aogositra, 2011
Tokony Hanondrotra Ny Karama Farany Ambany Ve i Thailandy?
Azia Atsinanana 29 Aogositra 2011
Zavatra anisan'ny nampanatenain'ny praiminisitra Yingluck Shinawatra sy ny Antoko Pheu Thai ny hanondrotana ny karama farany ambany ao Thailandy izay manodididina ny 160 baht ho lasa 300 Baht (US$10) ny andro iray. Araka ny efa nampoizina dia mandà izany fanondrotana ny karama farany ambany izany ny mpandraharaha. Ireto misy fihetseham-po avy amin'ny bilaogera
Georgia: Nampiasain'ireo Mpilatsaka Ho Fidiana Ho Filoham-pirenena Ny Haino Aman-jerim-bahoaka Any Amin'ny Faritra Misintaka
Azia Afovoany sy Kaokazy 28 Aogositra 2011
Mpilatsaka ho fidiana telo no nifaninana ho filoham-pirenena tamin'ity herinandro ity tany Abkhazia, faritra iray misaraka amin'i Georgia izay Rosia, Nicaragua, Venezuela, Nauru, ary Vanuatu ihany no nankatoa azy.Ny Komisiona Foibe Misahana ny Fifidianana dia nanombatombana ny taham-pahavitrihana ho 70 isan-jato ho an'ny latsabaton'ny faha 26 Aogositra.
Filipina: Firohotana Mihàza Katsatsaka Tokay
Azia Atsinanana 28 Aogositra 2011
Volana vitsy lasa izay, ny fihazàna ny Katsatsaka Tokay na Tuko amin'ny fiteny Filipiana dia lasa irohotana tokoa ao Filipina, noho ny tatitra mandeha fa hoe vola be no ividianan'ireo mpivarotra amin'ny alalan'ny aterineto ireo katsatsaka. Nanomboka ny fihazana rehefa niely ny tsaho fa afaka manampy amin'ny fitsaboana ny aretin'ny fahasemporana sy ny VIH/SIDA ny katsatsaka.Vao haingana izy ity no naharihary ho tena fitaka sy hosoka.
Libia : Tànan-Kavanan'i Gaddafi, Abdessalem Jalloud Niondrana Nankany Italia
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 28 Aogositra 2011
Ny vaovao avy any Libia dia miparitaka erak'izao tontolo izao, noho ny nahazoan'ireo mpihoko tsikelikely ny tanàna. Ny vaovao lehibe iray nalaza, dia ny fitsoahan' ny olo-maventy faharoan'i Libia teo aloha, Abdessalem Jalloud nankany Italia tamin'ny fiaramanidin'ny zotram-pitateran'i Malta nandalo tany Tonizia, araka ny nambaran'ny olona ambony iray ao amin'ny Governemanta Toniziana ankehitriny. Noraisin'ny olona maro ho mariky ny fiafaràn'i Gaddafi ny fialàn'i Jalloud.
Ginea-Bisao: Nanimba ny Sekoly ilay Oram-be nifanesy
Afrika Mainty 27 Aogositra 2011
Eo anelanelan'ny volana Jona sy Oktobra no fotoam-pahavaratra any Guinea-Bissau, izay mety hampisy fiantraikany eo amin'ny fiainana andavan'andro amin'io tanàna io. Misy sekoly mampiasa ilay efitrano ho toeram-pivoriana ho an'ny RV grantee Youth Voices of Bandim sy Enterramento izay niharan'ny fahapotehina mavesatra azo tamin'ilay tatitra mahakasika ilay andro ratsy nifanesy.
Meksika : Fankalazana ny faha 100 taonan'i Cantinflas
Amerika Latina 27 Aogositra 2011
Ity volana Aogositra ity i Meksika no mankalaza ny zato taona nahaterahan'i Mario Moreno mpanao hatsikana, diso fantatra amin'ny hoe Cantinflas . Any Meksika, ary manerana an'i Amerika Latina, Cantinflas dia fantatra ho mpilalao lehibe ary iray amin'ireo mpilalao hatsikana tena be mpitia indrindra any Meksika.Cantinflas no nisolo tena ny ankolafy mahantra ao Meksika. Vitany ny nisarika ny sain'ny olona handinika ny tsy fitoviana eo amin'ny mahantra sy ny manankarena taminà fomba tsy nanam-paharoa.
India : Mafàna fon'ny RTI sady Mpiaro Tontolo Iainana Novonoina Antoandro be Nanahary
Azia Atsimo 25 Aogositra 2011
Shehla Masood (39), mahery fo sy mpiasa ao amin'ny ONG Right To Information , na Zo hahazo Vaovao dia maty voatifitra teo anoloan'ny fonenany ao Bhopal ny Talata maraina. Fantatra tamin'ny fanentanana hiarovana ny tontolo iainana ihany koa izy. Maneho ny heviny ireo mpampiasa Twitter momba ity fahafatesana mampalahelo ity.
ANGLETERA:#BlameTheMuslims Tenifototra Tao amin'ny Twitter Nivaona Tamin'ny Tokony Ho Izy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 20 Aogositra 2011
Sanum Ghafoor, izay mandeha ao amin'ny Twitter amin'ny @Strange_Sanum, dia silamo 19 taona ary mpianatra ao Angletera. Tezitra amin'ny fanondroana avy hatrany ny Silamo ho tompon'antoka amin'ireo herisetra maro isan-karazany, indrindra fa ilay asa fampihorohorona tao Oslo tamin'ny herinandro lasa teo iny, nanao tora-po tamin'ny fibitsihana tamin'ilay tenifototra #blamethemuslims (an'ny silamo ny tsiny) i Sanum. Satria efa zary mahazatra antsika ny mahita lohahevitra iray mipariaka lavitra be toy izany eny am-pototsofin'ireo mpihaino, mahagaga fa efa mivaona amin'izay zava niseho ny fampiasàna azy, nitarika ho amin'ny fahasorenan'ireo mpampiasa Twitter tanteraka.
Palestina: Fiara Mpitrongy Tany Israeliana Nahazo Tsiny Noho Ny Fanapahany Ny Fifandraisan-davitra ao Gaza
Nipoitra teto amin'ny aterineto ny vaovao mikasika ny fahanginana tanteraky ny fifandraisan-davitra tao Gaza. Teo amin'ny Twitter, nanome tsiny ny fiara mpitrongy tany Israeliana noho ilay fahatapahana ireo mpampiasa twitter. Ireto ny sasany tamin'ireo resadresaka.
Vietnam: Mihoatra Ny 500 Ireo Olona Nanatrika Ny Barcamp Tao Saigon
Azia Atsinanana 19 Aogositra 2011
Natao ny Alahady farany teo, izany hoe ny 24 jolay tao amin'ny RMIT, Anjerimanontolo iraisam-pirenena ao an-tanànan'i Ho Chi Minh ao Vietnam ny fihaonam-be fahefatra natao hifanakalozan-kevitra tao Saigon (Barcamp) . Barcamp lehibe indrindra tao Saigon izy io raha jerena eo amin'ny habetsaky ny mpanatrika.